Madaxweynaha Puntland oo goor dhaw ku dhawaaqi doona golihiisa Wasiirada – Radio Daljir
Febraayo 10, 2019 11:06 b 0
Madaxweynaha Puntland Siciid C/laahi Deni ayaa lagu wadaa in saacadaha ugu dambeeya ee inagu so aadan in uu ku dhawaaqo liiska golaha wasiirada ee Puntland .
Diyaar garowgii ugu dambeeyayn ayaa ka socda madaxtooyada Puntland waxaana soo idlaaday kulamadii usocday madaxda Puntland.
Shacabka Puntland ayaa indhaha ku haya nooca ay noqon doonaan wasiirada uu soo dhisi doono madaxweyne Deni .
wararka ay helayso idaacada Daljir ayaa sheegaya in wasiirada uu soo dhisi doono madaxweyne Deni ay yihiin kuwo tiro ahaan aad uaga yar golihii wasiirada ee xukuumadii hore ee C/wali Gaas .
Daljir kala soco magacaabista wasiirada goor dhaw.